Ads pane Peji Rekutanga? | Martech Zone
Ads pane Peji Rekutanga?
China, November 22, 2007 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Kuona ichokwadi. Ndakagara ndichitenda izvo, kune imwe nhanho, kuti ichi ichokwadi. Iko kufunga kwemushandi ndiko kwechokwadi kwerudzi rwekambani kana mukuru wavanoshandira. Pfungwa yemusika ndeyekuti stock inopindura sei. Pfungwa yemutengi wako ndeyekuti kambani yako iri kubudirira sei.
Pfungwa yekubudirira kweblog iri ndeyemabatiro ainoita mari zvakanaka.
Sezvandinotarisa kwakatenderedza mambure, kune vamwe vano usatende mukuita mari yavo blog, uye vamwe kuti do. Sezvo ini pandakaona imwe neimwe yemasaiti ichigadzirisa masitayera avo uye nekuwedzera zvimwe kushambadza, kuverenga kwavo kwakakura sezvakaita mari yavo.
Ungasarudza mumiriri wezvivakwa anotyaira Cadillac kana Kia?
Zvichida kwete. Kuona ichokwadi. Kunyangwe yangu saiti ichiri kukura mukubudirira, yaive nguva yekuti ini ndakaita chimwe chinhu kuti ndipedze kune inotevera nhanho. Makambani mazhinji uye akawanda arikuuya kwandiri kuzoshambadza pane yangu saiti uye ini ndakanga ndisina imba chaiyo, kana hurongwa hwakakwana munzvimbo yekuchengeta iwo ma ads. Saka - ndakaita rimwe basa pamusoro wenyaya.
Ndakaita basa rekungwarira kwazvo pamusoro wenyaya, hazvo. Ini ndaida kupa kuiswa kukuru kune iwo makambani aishuvira kutsigira saiti, asi ini ndaisada kukanganisa zvirimo. Mazhinji emablog mabheti emari andinoona chaizvo misa nzira yevaverengi yezviri mukati nekushambadzira. Ini ndinotenda izvo zvinokanganisa uye hazvina basa. Ini pachezvangu ndinozvidza kupururudza kuburikidza neshambadziro yezvinyorwa, saka ndakashandisa mutemo wegoridhe ndichiita kushambadza pane yangu bhurogu.
Iwo ma ads ndiwo akajairwa 125px ne 125px, muyero wakanaka mune zvekushambadzira uye unowanikwa mune zvakawanda pa Commission Junction uye Doubleick. Kana chinzvimbo chikasashandiswa nemubatsiri chaiye, ndinogona kuchizadza neshambadziro kubva kune rimwe remasevhisi aya kana neshambadziro isina chinhu.
Kana izvi zvichikutsamwisa, ndinovimba handikurasike semuverengi. Iyo RSS feed kazhinji ine mumwe chete mutsigiri pazasi payo, asi iwe unowana zvakashomeka kushambadzira ipapo. Ndokumbirawo muzive kuti ini ndinogara ndichiramba vashambadziri. Vhiki rino ndakasvitswa nemumwe munhu aida kundibhadharira zvakanaka kuti ndiise shambadziro kumusoro. Pandakaita ongororo (aka: Google), ndakaona kuti vaizvidzwa paInternet nekuisa adware ne spyware. Ini ndinovaita kuti vazive kuti ini handitsigire sangano rinoshandisa nzira dzekunyengera seizvi.
Yekupedzisira katsamba, shamwari dzangu dzakaramba dzichitaura nezve 'glamour shot' pamusoro wangu. Mumwe munhu akatowana zvakaipa nezvazvo. Kuona ichokwadi, saka ndakatora pfuti yangu nezuro manheru neMacBookPro iSight kamera uye ndikaipikicha mumusoro. Aya ndiwo mashandisiro anoita vazhinji venyu ini ... kuchena musoro uye kunyemwerera!
Tags: nzvimbo yekushambadziraKushambadzirakushambadzapeji peji rekushambadzirawebhu kushambadzira
Kupenga uye Kushambadzira
Ko kana maBloggi akaenderera mberi nekurova?
Mbudzi 22, 2007 na3: 12 PM
Kutarisa zvakanaka Doug! Wataura chokwadi, izvo kushambadzira hazvisi zvekupusa zvishoma. Uyezve, ndinoda iyo nyowani. Zvakatsva chaizvo.
Mbudzi 22, 2007 na4: 52 PM
Kazhinji ini ndaiverenga yako blog kuburikidza neRSS, asi nhasi ndaifanirwa kunge ndatarisira kugadziriswazve.
Hmm… kwandiri izvozvi zvinotaridzika kunge zvakawandisa vanhu, uye kunyanya kubhenekera shambadziro kushambadzira kunetsa pakuverenga kwakanyanya. Ivo vanogara vachiedza kutora kubata kubva pamanyoro.
Kunyangwe ini ndisiri kupokana nekuita mari blog, ini ndinotsigira kupa iwo mavara nzvimbo yayo. Whitespace ishamwari, uye kwete chimwe chinhu chinofanirwa kuzadzwa neshambadziro.
Kana iri pikicha yako, ndinofunga yaizowana kubva kune imwe dhijitari yakasviba (aka. Photoshop kana yakafanana) basa. Iwo mavara anoratidzika kunge asina kusimba, uye pane chimwe chinhu chakashamisa kurudyi kurudyi, icho chinoita kuti chiso chako chioneke chakakura. Zvakare zvinoita sekunge hautarise zvakananga mukamera, ingodzima zvishoma. Pamwe pamwe neiyo airbrushed chena yakakukomberedza iwe musoro, izvi zvinopa eery, guru-kunge kunzwa.
Ini ndaizotora zvakare pikicha nehembe inowirirana neyako blog's color scheme. Pfura iwo mufananidzo neine lens refu, ipa imwezve mutsauko. Zvichida kupenya kudiki, kuti uwane kupenya mumaziso ako.
Mbudzi 22, 2007 na6: 08 PM
Anofara Kutenda, Doug. Ndakafarira kupfura kwako kwekuyevedza, asi ini ndinofarira iyo nyowani pfuti zvakare, zviri pachena zvakanyanya kuratidza kwekunyemwerera kwako pachako. Ini ndinoda fomati nyowani, futi. Ini ndinogona kufuratira izvo kushambadzira kana ndichida, kana kuzvitarisa kana ndichida, ndozvazvinofanira kunge zviri.
Mbudzi 22, 2007 na10: 52 PM
Ndiwo chaiwo maitiro akanaka awakatora pano. Wadii kushandisa adserver? Ndine chokwadi chekuti vashambadziri vako vanokwanisa kuteedzera iwo akadhinda iwo 🙂
Nov 23, 2007 pa12: 02AM
Hei Doug, ndine hurombo nezve vhidhiyo iyi muGoogle feed .. * oops *
Ndinoona iwe une dzimwe nzvimbo dzekushambadzira dziripo. Chii chavanoenda? Ndirove email paunenge uine mukana.
Ndine vhidhiyo iri kuzoita LOT yakawanda mari kupfuura Jaime's $ 70,000 mukutengesa mabhuku kwakamutendera kuhwina Next Internet Millionaire.
Tarisa kana iwe uine mukana.
Anofara Zuva reTurkey!
Nov 24, 2007 pa11: 58AM
Peji Yekushambadzira ikozvino yakwira!
Ini ndichave nechokwadi chekubata vhidhiyo, ini ndiri fan guru reblog rako.
Ndatenda! Uye ndinovimba wave nemwaka wakanaka wezororo!
Nov 23, 2007 pa11: 16AM
Uku ndiko kushanya kwangu kwekutanga kune yako saiti saka ini handigone kutaura nezve yako yekare dhizaini. Ini ndinoda yako nyowani dhizaini, zvakadaro, inotaridzika kutsva uye yakachena pasina kuwandisa kushambadzira.
Ini handina chokwadi nezvekuva nepikicha yako pane yako blog kunyange. ndinofungidzira zvinoita kuti chive chiitiko chega chega kana vaverengi vako vachiona zvauri.
Ndinovimba unogona kuzadza nzvimbo dzeshambadziro pane yekoramu yekuruboshwe munguva pfupi!
Mbudzi 23, 2007 na12: 35 PM
Hei Doug, ndinofunga chimiro chitsva chinotaridzika zvakanaka. Ini ndaive ndisina dambudziko neako wekare "glamour shot", asi iyo nyowani yakanaka futi.
Ramba uchiita basa hombe!
Mbudzi 23, 2007 na5: 18 PM
Akagadzira zvimwe zvidiki shanduko - zvimwe zvaive zvinoenderana nemhinduro:
Photoshopped rumwe ruvara mumufananidzo.
Yakatumira iyo Kushambadzira Mitengo Peji
Chinhu chimwe chaungave usina kucherechedza ndechekuti ini handina kunyatso kushandisa chero bhurogi nzvimbo kana ndichigadzira chimiro ichi.
Muchokwadi, izvo zvirimo zvirimo zvakapfupika zvishoma. Ini ndakango wedzera hupamhi hwechimiro chezvino. Ini zvakare ndakadzikira pasi saizi yemusoro kuitira kuti vanhu vakwanise kusvika kune zvemukati nekukurumidza.
Ndatenda nekundizivisa zvawafunga!
Nov 24, 2007 pa7: 41AM
Zvinogona kunge zvisina zvazvinoreva kwauri, asi wakandirasa semuverengi. Ndave nenguva ndichinzwa kusununguka nekuramba ndichitengesa zvewebhu nemablog mumazhinji uye ndinofunga ndiyo nguva yandakatanga kubvisa hukama hwangu kune iyo chikamu cheinternet. Saka, ehe, kuonekana ndinofungidzira; Ndakanakidzwa nekugara kwangu pano, asi izvozvi ndinonzwa runako rwanyudzwa kunze nemhirizhonga yekukumbira kukumbira mari. (Uye, sekunge parutivi; iyo Yemukati Link pop-pamusoro peashambadziro inofanira kunge iri imwe yemhando dzakaipisisa dzekushambadzira dzakatangwa)
Nov 24, 2007 pa11: 56AM
Ndinoonga nekundizivisa kwako uye ndine urombo kuti waenda. Ini handisi kukumbira chero munhu kuti andipe mari, asi handifunge kuti chitadzo kupa yakawanda kuraira pasina muripo uye kuyedza kuita mari kublog iri kune izere kugona.
Ini ndinofunga vamwe vanhu vanofunga kuti ndiri mupfumi kana chimwe chinhu zvichibva pakubudirira kweblog rangu. Sababa vasina vaviri, mumwe mukoreji, ndinogona kukuvimbisai kuti handisi. Ndiri solid middle class, handina imba (yet), uye shanda nesimba kuti ndichengete mari musavings. Kana ndikakwanisa kuwana mazana mashoma emadhora kubva kubhulogi rangu mwedzi wega wega, hazvisi kuzopedzerwa mudzimba dzezororo kana mota dzemhando yepamusoro… zviri kungoita kuti kubhadhara koreji yemwanakomana wangu kuve nyore zvishoma.
Kutenda nekurembera kwakatenderedza sekureba kwauinako!
Mbudzi 24, 2007 na5: 08 PM
Ini ndinobvumirana newe pane ino Doug. Ini handinzwisise kuti vanhu vakaita saMyk vangatarisira sei mablog uye mamwe mawebhusaiti kuendesa zvinobatsira zvakadaro pasina kuita mashoma madhora.
Kana iwe uri John Chow icho chinhu chimwe chete - iye akanyatsoenda zvishoma pamusoro pazvo nemamwe marongero ake emari. Asi sekutaura kwako mumashoko ako pamusoro paDoug, iwe unongova wepakati baba (seni) kuyedza kuisa mwanakomana wako kuburikidza nekoreji. Ini ndinonzwisisa zvizere uye ndinoremekedza chishuwo chako chekuita mari shoma kubva kublog rako. Nezvose zvirimo zvemukati izvo zvawakapa kune vako vaverengi, iwe unokodzera zvirinani izvo zvakanyanya.
Nov 25, 2007 pa4: 41AM
Kutanga kubva, Brandon, vanhu vakaita saMyk - boooh.
Ini ndanga ndichizvitaurira ini ndega ndega, saka ndokumbirawo usandiita kuti nditaridzike senge ndanga ndichitaura zvirevo.
Kune mumwe nemumwe zvake zvaive zvandanga ndichiedza kutaura. Asi unoziva, ini ndinobvumidzwawo kusarudza maBlog andakaverenga uye andisina, uye rega Douglas azive kuti sei.
Uye chekupedzisira, ini ndinosarudza iyo real estate Mumiriri iyo woudln´t kundibvunza kana ini ndamboedza iyo yazvino brand yekushambidza muromo, kana kana ini ndaravira iyi inonaka chaizvo soseji uku ndichiedza kunditengesera imba - asi, zvakare, izvo zvinongova kuda kwako wega.
(Iniwo ndiri baba, uye parizvino ndini chete ndinouya nemari kumba, saka ini handidi kupokana nekuwana mari, ndiri kungopokana kuti iyi ndiyo nzira chaiyo.)
Nov 25, 2007 pa6: 48AM
Ini ndichafanirwa kunamatira Doug pano; iwe unotaura kuti unokahadzika kuti kushambadzira ndiyo nzira kwayo yekuita mari kubva pane zvakakosheswa naDoug anoisa mubhurogu yake, asi haupi chero zano reimwe nzira yekuita mari. Saka ndinokudenha iwe Myk; kana iyi isiri iyo nzira kwayo sei nezvekurudzira kuna Doug nzira iri 'kurudyi', uye imwe iri zvakare inokwanisa mune zvemari?
Nov 25, 2007 pa6: 50AM
PS ini ndinogara ndichiwanzo tsvaga inosetsa zvinosetsa kana vanhu vachinyunyuta nezve izvo zvinhu zvavanopihwa mahara. FWIW.
Nov 25, 2007 pa7: 06AM
Iwe unoona, Mike, ndinoshora iyo pfungwa yekuti mablog anofanirwa kuve nehurongwa hwekuita mari zvachose. Ndine urombo, ndizvo zvazviri neni. Iko hakuna kushandiswa kukakavara iyi pfungwa chaizvo.
Uye ini ndinovimba kuti ini handina kuonana sekuratidza kuti Doug anofanira kuchinja chimwe chinhu zvangu. Haafanire. Anofanira kuita izvo zvaanofunga kuti ndizvo zvakanaka ake Blog.
Uye zvakangofanana, ndinofanira kuve nekodzero yekusarudza kuifarira; kana kwete, sezvazviri pano.
Pamwe zvandaitaura zvakauya zvichimupa mhosva, pachangu. Izvo hazvisi izvo zvandanga ndichiedza kuita. Chokwadi, handifarire nzira nzira dzekuita mari vatamira kumberi kwekubloga. Saka chii, kana iyi iri nzira inoenda iyi blog, zvakanaka. Izvo hazvisi izvo zvandiri kuda kubva kublogga uye ndinofunga ndine mvumo yekuita pamusoro pemanzwiro angu.
Kana zviri zvekundidenha. Zvakanaka… regai tione. Ini ndinofunga zvakakosha kuti uzive, kuti ini handisi mumwe wevanhu vanoda zvinhu zvemahara. Ini handidi download mumhanzi, ini handidi download mafirimu.
Zvikanzi. Ndingafarire kubhadhara mari yekunyorera iyi blog (kunze kwekunge iri, senge $ 300 pamwedzi). Zvino, ini ndinonzwisisa kuti kuchave neuto revanhu vanodanidzira hapana nzira nekuti iri internet uye ndeye mahara.
Zvakanaka, hongu. Iyo yemahara chengetedza iyo inotsamwisa kushambadzira uye texlink popups yezvinhu Handina kuuyira pano.
Pane zviripo mumabhuku aunoverenga here?
Handifarire kushambadza muTV-Series yangu. Ndosaka ndichitenga maDVD. Ini handidi kugara pakati pehafu yeawa yezvekushambadzira firimu risati ratanga, ndosaka ndichitenga DVD.
Ndino kwete tenda mune yemahara zvese pamutengo wekutemesa bhurogu yako neyakaipa yechitatu mapato.
I am ndakagadzirira kushandisa mari. Chete ini ndingadai ndazvipa zvakanangana naDoug pachinzvimbo chekufamba nemumvuri "tinya nematanho".
Nov 25, 2007 pa10: 59AM
Ini ndinonzwira tsitsi nemaonero ako uye ndinoonga kutendeseka kwako. Kana vanhu vakaita saFacebook neYouTube vatanga maitiro ekuita mari, ini ndinotanga kumhanyisa maziso angu.
Ini handisi kuzoita nharo kuti neimwe nzira 'zvakasiyana' nekuti iri bhurogu rangu - ndiri kungova kumberi kuti a) inogona kuburitsa mari yakawanda uye ini ndaigona kuishandisa! uye b) Ini ndinofunga pane fungidziro ine mari monetgs kuti ivo 'vanobudirira'.
Yekupedzisira katsamba: Bhatani rangu re "Nditengere Starbucks" pamwe rakandiitira madhora makumi maviri nemashanu mumwedzi mitanhatu yekupedzisira - saka mari yangu 'yakananga' yekuita mari yanga iri yekutamba. 🙂
Ndinovimba unoramba wakamira - iwe uchawedzera zvakawanda kune hurukuro pano!
Mbudzi 25, 2007 na1: 38 PM
Myk, ini ndanga ndisiri kuyedza kurwisa wega, ini handinganzwisise iyo "chinhu chisina maturo" maitiro.
Mbudzi 25, 2007 na3: 31 PM
@Myk: Iwe unoona, Mike, ndinoshora iyo pfungwa yekuti mablog anofanirwa kuve nehurongwa hwekuita mari zvachose. Ndine urombo, ndizvo zvazviri neni. Iko hakuna kushandiswa kukakavara iyi pfungwa chaizvo.
Handisi kuzoita nharo. Ndiwo maonero ako uye ini ndini ndinotenda kuti une mvumo pazviri. Ehe ndinofunga urikureva kusiri kwechokwadi, uye zvakafanana ndine kodzero kune iwo maonero, asi iwo ari maviri maonero uye hapana cheku * rwira * pamusoro, handiti? 🙂
@Myk: Pane mashambadziro mumabhuku aunoverenga here?
Hungu, anonzi “Magazini.” 🙂
Zvinosemesa ndezvekuti ini ndange ndiri nezuro ndichitsvaga kushambadzira mumagazini uye ndikawana kutsvagisa pa magazine.org izvo zvinoratidza zvese zvimiro zvinoratidza kuti vazhinji vaverengi vemagazini vanoona kushambadza sechinhu chakakosha chemagazini, kunyanya kana kushambadzira uku kwakanangidzirwa kuverengi.
@Handidi sezvishambadziro muTV-Series yangu. Ndosaka ndichitenga maDVD. Ini handidi kugara pakati pehafu yeawa yezvekushambadzira firimu risati ratanga, ndosaka ndichitenga DVD.
Uri kuenzanisa maapuro nemaorenji munzira dzakawanda. Ini ndinogona kukuudza kuti usafarire kushambadzira nekuda kwekuti iwe wakatemerwa kuti usavade, asi vanhu vazhinji havadi ivo, seni, nekuti kushambadzira kweTV kwakakosha kumanikidza panguva yavo. Blog kushambadzira zvakanyanya kushomeka kupfuura izvo uye (kunze kwekushambadzira kwepop-up) hazvitambise nguva yevanhu, kunze kweavo vanhu vanosarudza kushandisa yavo nguva vachizvifungira. '-)
@Myk: Ini handitende mune yemahara zvese pamutengo wekutema bhurogu yako neyakaipa yechitatu mapato.
Zvakanaka pamablog mazhinji: "Kunze kwaizvozvo Mai Lincoln, kwanga kuri sei kutamba?"
@Myk: Ini ndakagadzirira kushandisa mari. Chete ini ndingadai ndazvipa zvakanangana naDoug pachinzvimbo chekupfuura nepane imwe shady?
Kufungidzira kwangu uri mune vashoma zvakanyanya. Kana zvisiri, zvingave zvakafanira Doug nemamwe mabloggi kuvandudza zvivakwa zvinodiwa kutsigira sarudzo yakadaro, asi inofanirwa kunge iri sarudzo nekuti zvirokwazvo inopfuura 90% yaisazobhadhara. Ndine chokwadi chekuti pane vanhu vakaringana vanoita kuti kuvandudzwa kwenzvimbo dzakakosha kuve kwakakodzera, asi ndinogona kunge ndakanganisa uye handidi kuzvipinza kuti ndidzivise chinhu chaidiwa nemumwe munhu.
@Myk: Chokwadi, ini handidi senzira nzira dzekuita mari dzave kuenda kumberi kwekublogi. Saka chii, kana iyi iri nzira inoenda iyi blog, zvakanaka. Hazvisi izvo zvandiri kuda kubva kublogga uye ndinofunga ndine kodzero yekuita maererano nemanzwiro angu… .Ndinofara kubhadhara mari yekunyorera iyi blog (kunze kwekunge iri, senge $ 300 pamwedzi). Zvino, ini ndinonzwisisa kuti kuchave nejoni revanhu vachapopota zvisina kana nzira nekuti indaneti uye mahara.
Iwe une kodzero zvachose yekuita pane zvaunonzwa, chero zviito zvako zviri pamutemo! (semuenzaniso, kupaza moto imba yaDoug yaisazove nzira yakakodzera yekuita pane iwo manzwiro, hongu. 🙂 Asi semunhu anofarira kudzidza hunhu hwevanhu ini ndinowana manzwiro ako akanyatso. chechimwe chinhu chaive mukuchinja uye izvozvi ndizvo zvachinjawo iwe hauchichide kunyangwe hazvo kuti igare nenzira yaakatanga hazvina musoro.
Nhoroondo ine mienzaniso mizhinji yeavo vasina kubvisirwa, uye iwo ese anova mavara ezasi munhoroondo. Semuenzaniso, kune avo vakavenga maCD nekuti vaifarira vinyl, asi kusagutsikana kwavo hakuna kukanganisa chiratidzo chekuchinja kuenda kumimhanzi yakavharwa nedhijitari. Similary avo vanovenga kushambadzira pamablog havazokonzere mablog kuti vadzokere zvakare mahara; blogging iro rakawandisa dambudziko kuti uite zvakanaka (Ndinoziva, ini ndakaedza uye ini handizviite nemazvo!) kuti vanhu vanoda kurudziro yezvehupfumi kuzviita nemazvo. Uye nekupihwa dzese dzimwe sarudzo idzo muverengi anadzo, mamodheru ekunyorera haashande asi ekushambadzira mamodheru anoita Kunyangwe New York Times yatamira kushambadziro; NYT yakaona kuti kutarisisa kwaikosha zvakanyanya kupfuura kuchengetedza: http://www.mikeschinkel.com/blog/attentionhasbecomeworthmorethanprotection/ (Asi ungangoda kusatevera chinongedzo nekuti ndine ma ads papeji.)
Zvisinei, icho chinonyanya kukosha mukukakavadzana kwangu ndechekuti kusada kwako kushambadziro kunongokukanganisa chete (uye avo vane manzwiro akafanana) uye zvinokukanganisa zvisina kunaka; IIWE ndiwe unosunungura kubva pamanzwiro aunosarudza kuva nawo. Pane chirevo chekare chinoti “Murume akarohwa nejasi. Akafunga kwainobva ndokutanga kuita bhizinesi rake. ” Unogona kushandirwa nezve kushambadza pamablog uye nekuzvikonzera wega kurwadziwa kwemoyo, kana iwe unogona kungozvigamuchira.
Wati "Usapikise pfungwa" saka ungangodaro uchifunga kuti ndiri kuita nharo asi ini handisi. Ndiri kukurukura nyaya yekutsamwiswa nezve chimwe chinhu chakashanduka uye icho chisingachinjike munzira yekare uye kuti izvo zvinongodzora sei hupenyu hweiye munhu anogumbuka. Saka muchidimbu, kana iwe ukadzidza kugamuchira shanduko iyi, unenge uri munhu anofara.
Mbudzi 24, 2007 na4: 07 PM
Ini zvakare ndakabvisa shambadziro refu pamusoro pemapeji angu ega, ndichiwanazve imwe nzvimbo kubva kushambadziro dzazvino!
Mbudzi 24, 2007 na9: 07 PM
LOL! Yako posvo inonzwika seyako kuyedza kururamisa chinzvimbo chako zvakati wandei! '-) Kugadzira chikamu chakakura chazvo kunongotaridza chokwadi. Ingozviita uende mberi. Kana vanhu vachida kurira pamusoro pazvo, iri iro dambudziko ravo.
BTW, ini zvirinani kushandisa Kia muridzi kune real estate mumiririri; Ini ndaizofunga kuti vaive nemukana uri nani wekuva netsika. Kunze kwezvo, ndiani anotyaira Cadillac nhasi ane chero kirasi zvakadaro? Zvakanaka, izvo zviri kunze kwaKate Walsh… '-)
Mbudzi 24, 2007 na10: 02 PM
Chokwadi, Mike. Ini zvechokwadi ndanga ndichida kururamisa kushambadzira - munguva yakapfuura ndaiwanzo tsoropodza vanhu vaimhanyisa shambadziro kwese pamba peji ravo. Ini ndakaita, zvakadaro, ndakangwarira pakuiswa pane ino tema.
Handifunge kuti pane hukama pakati pebatsiro nemitemo - uye ndinoda iyo CTS nyowani uye ndingade kutyaira imwe… asi zvichave makore mashoma ndisati ndatambisa mari pamota yepamusoro - kana zvamboitika.
Mbudzi 24, 2007 na10: 33 PM
Oops, ndinoreva kuti "kururamisaKwete "ruramisira'… (Doh! 🙂
Uye nezve purofiti nehunhu, pamwe ndanga ndichingodzora pfungwa yangu yekufungidzira ye "bvudzi rebhuruu muCadillac”Zvakati wandei (akatorwa kubva kunhepfenyuro yemuno nhepfenyuro nezvevazhinji varidzi venzvimbo.)
Zvisinei, rakakura blog (kunze kwechinhu ichi '-p)